Open Tender No.110 to 114 and 15 T 3, 4
Tue, 2019-02-05 14:30
Open Tender No.110 to 114 and 15 T 3, 4.pdf
Open Tender No. 106 to 109
Thu, 2019-02-14 14:30
Open Tender No. 106 to 109.pdf
Myanma Port Authority Invitation to Open Tender
Tue, 2019-03-05 13:00
1.Myanma Port Authority is planning to construct the following two vessels by foreign currency, USD (United States Dollar) only within for the 2018-2019 and 2019-2020 fiscal years. Therefore, interested Tenderers are cordially invited to submit complete project proposal for the following project;
5000 BHP, 65T ASD Tug
2.Tender Forms can be purchased at the Planning Section, Theinbyu Dockyard, Mechanical Engineering Department, No.557/559, Strand Road, Seikkan Township, Yangon, Myanmar of during office hours starting from 21st Jan 2019.
3.Tender to be performed by one tender two sealed envelopes system, Prequalification Bid and Price Bid to be submitted with each sealed envelope. We will explain about the Prequalification Bid at 13:00 hrs. on4Feb 2019 at the Meeting Room-No.1 of Head Office, Myanma Port Authority, No-10 Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
4.If you need more detailed information, please can be inquired at telephone no. 951-8610218, 951-8610225. Webmail: amhr1@mpa.gov.mm
MPA TENDER (18.1.2019).pdf
ဒီဇယ်ဆီ (H.S.D)၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ (P.H.S.D) နှင့် ဓါတ်ဆီ(Octane-92) တို့ကို ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Fri, 2019-02-08 14:00
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ (H.S.D)၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ (P.H.S.D) နှင့် ဓါတ်ဆီ(Octane-92) တို့ကို ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများကို ၈.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၁၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည်။
တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းများကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း (ဗိုလ်တထောင်ဘုရား အနောက်ဖက်၊ ကွန်ကရိလမ်း၊ Toll Gate အနီး)၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် (၈.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ နှင့် ၀၁-၈၆၁၀၂၃၂ တို့ကို စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
သင်္ဘောစက်အရန် ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Tue, 2019-01-22 14:00
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ရှိ ရတနာသိင်္ခ၊ သီဟဒီပ၊ ဆင်ပြောင်၊ နတ်သား(၂)၊ ဟိုင်းကြီးနှင့် မာန်အောင်(၃) ရေယာဉ်တို့တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော သင်္ဘောစက်အရန် ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၂.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ (၁၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း (ဗိုလ်တထောင်ဘုရားအနောက်ဖက်၊ ကွန်ကရိလမ်း၊ Toll Gate အနီး)၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် (၇.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ နှင့် ၀၁-၈၆၁၀၂၃၂ တို့ကို စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
လေလံစာရင်းဝင် ကုန်သေတ္တာ(၃၂)လုံး အတွင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်ရှိ မျက်မြင် အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် လေလံတင် ထုခွဲ ရောင်းချရန် လေလံကြော်ငြာခြင်း
Fri, 2019-01-25 16:30
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ကုန်လုပ်ငန်းဌာန (ဆူးလေဆိပ်ကမ်း)တွင် ထိန်းသိမ်း ထားရှိသော လေလံစာရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး (၁) နှစ်ကျော်ကြာသည်အထိ လာရောက် ထုတ်ယူမှု မရှိသည့် ကုန်သေတ္တာ(၃၂)လုံး အတွင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်ရှိ မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း (၂၉-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) အချိန်တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ​လေလံတင် ထုခွဲ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗဟိုပစ္စည်း ထိန်းဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း (ဗိုလ်တထောင်ဘုရား အနောက်ဘက် ကွန်ကရစ်လမ်း၊ Toll Gate အနီး)၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၈-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ရုံးဖွင့်ရက်/ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်း အမှတ်၊ ၀၁-၈၆၁၀၂၂၉ နှင့် ၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၂)၊ နေပြည်တော်၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Wed, 2019-01-09 15:00
Open tender No.93 to 98 and 12(T)9/REB
Open tender No.93 to 98 and 12(T).pdf
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန e-Government ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း တင်ဒါအမှတ်စဉ် (ITCSD- ၆/၂၀၁၈ )